गोकर्ण रिसोर्ट, टेकुको व्यापरिक मल 'बिजनेस पार्क', काठमाडौं प्लाजा लगायतबाट उठाएको भाडा र नबिल बैंक, होटल डेल अन्नपूर्णजस्ता कम्पनीको सेयरबाट हुने आम्दानी ट्रष्टको खातामा वर्षेनी थपिन्छ। २०७०/७१ मा ट्रष्टको खातामा २६ करोड ४५ लाख रुपैँया थियो। तर एक वर्षमै ७ करोड ६४ लाख आर्जन गर्‍यो। ट्रष्टको खातामा ३४ करोड ७ लाख पुग्यो। अहिले ट्रष्टको खातामा ४० करोड पुगेको छ। त्यो वर्ष ट्रष्टले ब्याजबाट मात्र १ करोड १३ लाख आम्दानी गर्‍यो।
'खर्च गर्ने कुनै कार्यविधि नभएकाले आम्दानी र त्यसको ब्याज थपिएको थपियै भएको हो,' ट्रष्टका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले भने।
'सञ्चालक समितिको बैठक २०७३ साउन ३ गते बसेको थियो,' उनले भने, 'खर्चको कार्यविधि लगायत १४ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए। तर आगामी बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै उठेको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।'
सञ्चालक समिति 'मिनी क्याबिनेट' छ, तर करोडौं पैसाको सदुपयोगका लागि कार्यविधि तयार गर्न सकेको छैन।
'अब गरिब को हो? गरिबीको आधार के हो? अस्पताल कहाँ सञ्चालन गर्ने? कसरी गर्ने? बजेट भएर मात्र हुन्न कसरी काम गर्ने भन्ने विधि हुन पर्‍यो,' कार्कीले भने।
बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा कयौँ काम अल्झिएको छ। काठमाडौंको दक्षिण ढोकामा ४० रोपनी जग्गा 'युथ इन्टरनेशनल' स्कूलले चलाएको छ। उसले लिज नवीकरण गर्न खोजे पनि ट्रष्टको सञ्चालक समिति नबस्दा निर्णय हुन सकेको छैन।
'टिकट काउन्टर बनाउन, त्यहाँ ट्वाइलेट, पानी, सुरक्षा चेपपोस्ट निर्माणका लागि ४ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई मागेका छौं', कार्की भन्छन्, 'निकासा भएन, आम्दानी हुने ठाउँमा पनि अर्थ मन्त्रालय खर्च गर्न तयार छैन।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ४, २०७४, ०५:५३:०२